အဘိုးအဘွားတွေ ဂုဏ်ယူကြမယ့် မိန်းကလေးဖြစ်စေဖို့ လောကဝတ် (၆) ခု
ကျွန်မတို့ရဲ့ လက်ရှိဒစ်ဂျစ်ကမ္ဘာမှာ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဟာ ခေတ်နောက်ကျသွားပြီဖြစ်ပေမယ့် တကူးတကမဖော်ပြထားဘဲ အလိုက်တသိနားလည်ရမယ့် လောကဝတ်တွေတော့ ရှိနေပါသေးတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သင့်အနေနဲ့ လုပ်ရမယ့်အရာတွေနဲ့ မလုပ်သင့်တဲ့အရာတွေကို သိထားခြင်းက ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် first impression ကောင်းစေပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် လေ့လာကြည့်ရအောင်။
၁။ စားပွဲပေါ်မှာ အိတ်မတင်ပါနဲ့
အမျိုးသမီးတိုင်းဟာ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ဝင်ထိုင်တဲ့အခါ ပထမဆုံး သူမရဲ့ အိတ်ကို ဘယ်နေရာမှာ ထားရမလဲဆိုတာမျိုး နေရာအရင်ရှာဖွေကြပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ဘယ်လိုပိုင်ဆိုင်မှုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် စားပွဲပေါ် မတင်ပါနဲ့။ စားပွဲဟာ သန့်ရှင်းနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက် သင့်အိတ်ကို ညစ်ပတ်စေနိုင်တာကြောင့်ပါ။ နောက်တစ်ခုက သင့်အိတ်က စျေးကြီးနေမယ်ဆိုရင် ပိုပြီး အနှောင်အယှက်ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။
၂။ အများပြည်သူပိုင် toilet မှာ အချိန်တွေအကြာကြီး မိတ်ကပ်ပြင်နေတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့
ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်။ အများပိုင်နေရာဟာ အားလုံးအတွက်ဖြစ်တာမို့ ကိုယ်သာ စောင့်နေရသူဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ပါ။ တစ်ခြားလူတွေအတွက် အင်မတန်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ ကိစ္စဖြစ်တာကြောင့် ဆင်ခြင်ပါ။
၃။ နောက်ကျနေတယ်ဆိုရင် မက်ဆေ့ချ်အရင်ပို့ထားပါ
တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ အကျိုးအကြောင်းရေရေရာရာမရှိဘဲ အရမ်းနောက်ကျနေတဲ့အခါ ဒါဟာ ယဉ်ကျေးတဲ့အပြုအမူမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ သင်နားလည်ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်စုံတစ်ဦးကို စာပို့ဖို့နှင့် သင့်အချိန်ရဲ့ ပြဿနာတွေကို ပြောပြဖို့ စက္ကန့် ပိုင်းလောက်ပဲ ကြာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်တို့ အဖက်လုပ်လိုက်ရအောင်။
၄။ တစ်ခုခုစားသောက်နေချိန်မှာ ဖုန်းကို မကိုင်ပါနဲ့
သူငယ်ချင်းတွေ၊ ချစ်သူတွေနဲ့ ညစာစားနေချိန်မှာ အလုပ်ကိစ္စတွေကို Reply ပြန်နေတဲ့ သင့်ကိုယ်သင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ မအားဘူးဆိုရင် ဘာကြောင့်တွေ့ကြသေးတာလဲ?
၅။ စီးပွားရေးအရ ညစာစားပွဲတွေ၊ နေ့လည်စာတွေမှာ အကြွင်းအကျန်တွေကို မထုပ်ခိုင်းပါနဲ့
ဒီလိုပြုလုပ်တာဟာ သင့်အနေနဲ့ အလွန်ဆာလောင်နေပြီး သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက သင့်ကို ဝဝလင်လင်မကျွေးဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ညစာဟာ စားရင်းတန်းလန်းဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တောင် စားသောက်ဆိုင်မှာ ထားခဲ့ပါ။
၆။ ပါတီပွဲတွေကို လက်ဗလာနဲ့ မသွားပါနဲ့
အိမ်ရှင်ကို လေးစားခြင်းက သင့်လျော်သော လောကဝတ်ဖြစ်ပြီး သင့်အိမ်နီးချင်းတွေကို သင့်အကြောင်း မကောင်းပြောနိုင်ခြေ နည်းစေပါတယ်။ ပါတီပွဲတစ်ခုကို သွားမယ်ဆိုရင် သင့်ကို ဖိတ်ကြားသူတွေနှစ်သက်စေဖို့ အတူတူယူဆောင်သွားပါ။
ကိုယ့်စိတ်ခံစားမှုပေါ်မူတည်ပြီး ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အနုပညာကုထုံး လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးမျိုး
ဘယ်လိုအနုပညာကုထုံးက သင့်ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာလဲ? တစ်ခါတစ်ရံ သင့်ရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းတွေက သင့်ခေါင်းထဲကို ရောက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင့်အတွေးတွေက တစ်နာရီကီလိုမီတာ ၁၀၀နှုန်းနဲ့ ပျံနေပြီး သင့်ဦးနှောက်က ပေါက်ကွဲတော့မလို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အဲ့လိုဖြစ်လာရင် အနုပညာကုထုံးအချို့ကို လုပ်ကြည့်ရမယ့်အချိန်ပါပဲ။အခြေခံအကျဆုံးအနေနဲ့ တစ်ခုတည်းသော...
အကြွေးတွေ ဆပ်စရာတွေရှိနေချိန်မှာ စိတ်ဓာတ်မကျအောင် ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲ?
သင့်ရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေဟာ အကြွေးတွေကို ပုံမှန်ဆပ်နေရတာကြောင့် တဖြည်းဖြည်းဆိုးရွားတဲ့အခါ စိတ်ပျံ့လွှင့်စရာတွေ၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေကြုံတွေ့လာရနိုင်ပါတယ်။ အကြွေးဆပ်တယ်ဆိုတာ ပမာဏများရင်များသလောက်တစ်နေ့တည်း ပြီးသွားမယ့်အရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အကြွေးတွေနဲ့ နေထိုင်ရတဲ့အခါ စိတ်ဓာတ်မကျသွားဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီအချက်အလက်လေးတွေကို မျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ သင့်ရဲ့...
အဝတ်လျှော်စက်ကို ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ အဝတ်လျှော်အမှား (7)ခု
အဝတ်လျှော်စက်က မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဝတ်လျှော်စက်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာရှည်အသုံးခံချင်ရင် ထိန်းသိမ်းမှုကောင်းတွေ များစွာလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ အဝတ်လျှော်စက်တွေကို ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ အချက်လေးတွေကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ ၁။ ဆပ်ပြာ အများကြီးသုံးခြင်း ဆပ်ပြာများများသုံးလေ အဝတ်ပိုသန့်လေလို့ လူအများစုက...
ဆံပင်တစ်ခါရှည်ဖို့ အချိန်အကြာကြီးစောင့်ရတဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် ဆံပင်ရှည်လွယ်သော အစားအစာများ
ရှည်လျားပြီး တောက်ပသော ဆံပင်ထုကြီးကို အိပ်မက်မက်နေပါသလား? စိတ်မပူပါနဲ့။ သင့်အတွက် ဆံပင်ရှည်အောင် ကူညီပေးနိုင်တဲ့ အစားအစာတစ်ချို့ရှိပါတယ်။ ၁။ ကန်စွန်းဥ ကန်စွန်းဥတွေမှာ ဗီတာမင် အေနှင့် ဘီတာကာရိုတင်းတို့ပါဝင်တာကြောင့် ကျန်းမာသော ဆံပင်ရှည်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ရစေရုံသာမကဘဲ ကျန်းမာသော ဦးရေပြားအတွက်လည်း...